Sat, Dec 14, 2019 at 3:52pm
मछिन्द्रद्वारा ब्रिगेड ब्वाइज क्लब २–० गोल अन्तरले पराजित #आहा खबर# कांग्रेसको आन्तरिक विवाद चर्किँदै, सहमति गराउने जिम्मा दोस्रो तहका नेतालाई #आहा खबर# बक्सिङका स्वर्ण पदकधारीलाई थप चार लाख #आहा खबर# द्रुतमार्ग निर्माणको काम द्रुत गतिमा अघि बढाउँदै नेपाली सेना #आहा खबर# हनुमन्ते नदी सफाइ अभियानमा पाँच टन फोहर सङ्कलन #आहा खबर# साताको शेयर बजार : दुई अर्ब ५६ करोडको कारोवार #आहा खबर# धनुषा विष्फोटः 'विप्लव'समूहको संलग्नता, घटना प्रवृति व्यक्तिगत ! #आहा खबर# देउवा र पौडेलबीच छलफल, यस्ता विषयबारे छलफल #आहा खबर# भ्रमण वर्ष सफल पार्न रेस्टुरेन्ट तथा बारको भूमिकामा जोड #आहा खबर# छोराछोरीको शिक्षामा देखिएको विभेद हटाउनुपर्छ : मन्त्री बाँस्कोटा #आहा खबर# धनुषा विस्फोटका अपराधीलाई कारवाही गरिछाड्ने गृहमन्त्रीको प्रतिबद्धता #आहा खबर# पहिरो खसेपछि बेनी–जोमसोम सडक विहानैदेखि अवरुद्ध #आहा खबर# बेलायत चुनाव : भारतीय मूलका १५ सांसद बने, ३ जनाले जिते पहिलोपटक #आहा खबर# योगले मस्तिष्कलाई फाइदा गर्छ, अध्ययनले अरु के-के भन्छ ? #आहा खबर# धेरै खुर्सानी खान किन मन लाग्छ ? पिरो खानु कत्तिको स्वास्थ्यबर्द्धक ? #आहा खबर#
राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायु सेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) ले जापानको नारिता अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा चार्टर्ड उडान गर्ने भएको छ ।
आगामी भदौ १२ गतेदेखि जापानको ओसाका सिधा उडान गर्ने तयारी गरेको निगमले नारिता विमानस्थलमा उडानको अनुमति पाएको हो । निगमले आउँदो अक्टोबरअर्थात् असोज महीनादेखि चार्टर्र्ड उडानको अनुमति पाएको निगमका प्रवक्ता गणेशबहादुर चन्दले राससलाई जानकारी दिनुभयो । निगमले नारिता विमानस्थलमा दुई वटामात्र चार्टर्र्ड उडान अनुमति पाइएको बताइएको छ । वाइडबडी ए–३३० जहाजमार्फत ओसाका र नारिता उडान गरिनेछ ।
निगमले नारितामा नियमित उडानका लागि सबै कागजी प्रक्रिया पूरा गरिसकेको छ । यो गन्तव्यमा सातामा तीन दिन उडान गर्ने निगमको योजना छ । नारिता गन्तव्यमा धेरै नेपाली यात्रु पाउने निगमको विश्वास छ । नारिता जापानको राजधानी टोकियो प्रवेश गर्ने मुख्य हवाई प्रवेशद्वार मानिन्छ । ओसाकामा नारिताको तुलनामा कम नेपालीको बसोबास रहेको छ ।
निगमले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट ओसाका कन्साई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा साताको तीन दिन मङ्गलबार, बिहीबार र शनिबार उडान भर्ने निगमले जनाएको छ ।